10 -ka Moodel ee ugu Lacagta Badan Adduunka 2021 | Shaqooyinka
Bogga ugu weyn 10 -ka Moodel ee ugu Lacagta Badan Adduunka 2021 -ka
isha sawirka: www.pinterest.com
Inta badan ragga iyo dumarka dhallinta ah ee leh muuqaallada dhexdhexaad-ka-sarreeya ayaa dadku u sheegeen hal mar inay noqdaan moodello ama inay samayn doonaan moodallo guulaysta.
Dhowr sano ka dib oo aad bilowdo inaad aragto suurtagalnimada maxaa yeelay lugahaagu waa dheeraadeen. Waxaa la joogaa waqtigii la ogaan lahaa Qaababka Lacag -bixinta ugu sarreeya Adduunka oo mid laga dhigi karo ku dayasho.
Kaliya fiirinta sawirada wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee cajiibka ah ayaa ku filan inaan ku ogeysiiyo inay qaadaneyso wax ka badan labo lugood oo dhaadheer oo qurux badan iyo weji qurxoon si ay u noqoto moodel ugu mushahar fiican 2021.
Markaad tan maanka ku hayso, waxaa muhiim ah inaad fahanto inay jiraan qaabab kala duwan oo lagu daydo, iyo fahamka shakhsiyaddaada iyo meesha aad ku habboonaan lahayd ayaa kaa caawin doonta inaad doorato oo aad is -diyaarsato oo aad u diyaargarowdo si habboon.
Waa Maxay Noocyada Ku -dayashada?
Noocyada kala duwan ee qaabaynta waxaa ka mid ah:
1. Qaabaynta Runway -ga
Inta badan tani waa qaabka lagu daydo dadka badankoodu waxay ka fekeraan markay ka hadlayaan qaabaynta. Celcelis ahaan, waxay kasbadaan wax ka badan qaababka kale ee qaabaynta. Had iyo jeer, waxay ka mid yihiin Qaababka Lacag -bixinta ugu sarreeya.
Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin shuruudo jidheed oo aad u adag marka la barbar dhigo qaababka kale ee qaabaynta. Ragga, dhererka ugu yar ee 6 cag ayaa inta badan loo baahan yahay halka wax kasta oo ka sarreeya 5'8 ”ay haweenku aqbali karaan.
Sida dad badani horeba u ogaadeen, waxaa jira shuruudo cabbir iyo culeys halkan.
Wakhtiyadan dambe, ka dib markii ay soo kordheen khalkhalka cunnada ee moodooyinka, shuruudaha culeyska ayaa laga yaabaa inaysan u adkayn sidii ay ahaayeen sannado ka hor laakiin weli waa muhiim in moodooyinku la kulmaan stats -kan; [Bust 32 ”- 36”, dhexda 22 ”- 26”, miskaha 33 ”- 35”]
Daabac/Kataloog ama qaabaynta tifaftirka
Halkan, waxaa lagaa filayaa inaad ka soo muuqato daboollada majallada iyo bogagga.
Caadi ahaan, qaabkan qaabaynta, ma jiraan xannibaadyo adag oo ku saabsan sida moodelku u ekaan doono.
Waxay wax weyn ka tari doontaa haddii aad leedahay muuqaalo wajiga oo aad u soo jiidasho leh oo soo jiidan kara qaybaha kala duwan ee wejigaaga.
Sidoo kale akhri: Top 10 Majaajilaystayaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka
3. Qaabaynta dhar -gacmeedka/dabaasha
Magaca ayaa sheegaya waxa jira oo dhan oo ku saabsan arrintan. Tan darteed, waxaa muhiim ah inaad aad ugu raaxaysato maqaarkaaga si aad ugu caddaalad samayso dharka.
Moodooyinkaani waxay sidoo kale ka mid yihiin Qaababka Lacag -bixinta ugu sarreeya.
4. Ganacsiga TV -ga, badeecad nool, tusidda qolka qolka
Qaab -dhismeedkan ayaa halis ugu jira kororka dhawaanahan ee suuqgeynta saamaynta iyo moodooyinka warbaahinta bulshada.
Ganacsiyo badan ayaa hadda doorbidaya inay la shaqeeyaan “saameeyayaasha” waxa hadda loo yaqaan suuqgeynta saamaynta.
Tani dhab ahaantii waxay kuu noqon kartaa faa iido maxaa yeelay hadda oo leh bogga warbaahinta bulshada ee muuqda waxaad ka heli kartaa magacyo gaara inay kula shaqeeyaan.
5. Qaabaynta niche
Tan waxaa ka mid ah moodooyin lagu daray, moodooyinkii hore, moodooyinka jirdhiska, moodooyinka lagu xardhay iwm. Asal ahaan, hadda qof walba meel buu u bannaan yahay, taasi waa mid ka mid ah bilicda qarniga 21aad iyo da'da baraha bulshada.
Marka, haddii aadan lahayn muuqaalka wanaagsan ee caadiga ah waxaad wali si weyn u samayn kartaa tusaale ahaan, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad heshaa niche.
Hadda oo aad fahantay oo laga yaabo inaad dooratay hoygaaga waa muhiim inaad hesho oo la shaqayso wakiil khibrad leh oo kaa caawin kara inaad heshid heesaha kugu habboon.
Waxa kale oo muhiim ah in aad haysato faylal aad u qurux badan oo ay ku jiraan macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo sawirro xirfadeed iyada oo ku xidhan nuuggaaga waxaad u baahan doontaa sawirro u dhow wajigaaga, sawirro buuxa oo jirkaaga ah oo leh dhar fudud, iyo qurxinta ugu yar.
Waxay kaloo caawin doontaa haddii aad xoogaa sawirro xirfadeed ka haysato toogasho laga yaabo inaad hore u samaysay.
MUUQAALKA RAGGA UGU SAREEYA
Laga soo bilaabo cilmi -baarista, way fududahay in la fiiriyo in moodooyinka labka ah aysan si fiican u bixin sida dumarka dhiggooda ah.
Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshahan qiimahan iyo mushaharka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sabab u tahay xaqiiqda ah in moodellada dumarku ay noqon karaan kuwo aad u badan isla markaana leh dakhliyo badan oo dakhli ah ama laga yaabo inay u fududaato kala duwanaanshaha ilaha dakhligoodu.
Taasi waxay tidhi, moodalka ugu mushaharka badan ragga adduunka hadda waa Sean O'Pry oo ku dhashay Mareykanka.
Sean wuxuu kasbaday $ 1.5 milyan oo cajiib ah.
Waxaa lagu ogaaday isagoo da 'yar isagoo adeegsanaya astaantiisa sirta ah. Illaa iyo hadda O'Pry wuxuu la soo shaqeeyay magacyada moodada waaweyn sida Calvin Klein, Versace, Ralph Lauren, iyo kuwo kale oo badan. Wuxuu kasbaday kaalinta labaad ee ugu dhow liiska, David Gandy in ka yar hal kun oo doolar.
MUUQAALKA UGU SAREEYA EE WAQTI KASTA
Moodooyinka badankood si isku mid ah ayaa loo bixiyaa laakiin qiimaha saafiga ah ee moodooyinka badankoodu aad bay u kala duwan yihiin oo keliya sababtoo ah awoodda ay u leeyihiin inay u kala duwanaadaan oo u maalgashadaan dakhligooda si caqli leh.
Si kastaba ha noqotee, way fududahay in lagu dhejiyo moodalka leh qiimaha ugu sarreeya sida Salvica Ecclestone oo 63 jir ah oo u dhashay Croatia. Qiimaheeda waxaa lagu qiyaasay in ka badan 1.2 bilyan oo doolar. Hantida ugu badan waxay ka timaadaa meherado kale oo iyadu leedahay oo maamusho.
TUSAALOOYINKA UGU CAANSAN MA TAHAY KHAYRKA?
Way fududahay in la ogaado is -waafajinta u dhexaysa caan -qaadka tusaalaha iyo mushaharkooda.
Moodooyinka badankooda waxaa la siiyaa lacag badan haddii ay caan ku yihiin warbaahinta caadiga ah.
Sidoo kale waa wax iska caadi ah in la arko in sumado badan ay sidoo kale u safan yihiin inay la shaqeeyaan moodooyinkaan iyagoo ka tagaya moodooyinka cusub ee warshadaha oo kaliya hoos -u -dhaca hooska.
Akhri: Waa Kuwee Kuwa Ugu Sarreeya Bixiyaasha Biyaha? | Dalalka ugu sarreeya 2021 -ka
INTEE AY LEEYIHIIN SABABADA SUPER?
Hagaag, celcelis ahaan inta badan moodooyinka waaweyn ee Mareykanka waxay sameeyaan qiyaastii $ 112,685 sanadkii ama qiyaastii $ 54.18 saacaddii. Guud ahaan, mushaharka moodelku wuu ka sii sarreeyaa iyada oo astaanteeda ay ku korayso warshadaha.
TOP 10 MISALOOYINKA UGU SHAQADA BADAN 2021
Waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah gabdhaha Kardashian. Kendall ma jiidin khadka TV -ga dhabta ah iyada iyo walaalaheed kale laakiin waxay u dhistay xirfad iyada lafteeda tusaale ahaan. Waxay bilawday moodelinta markay ahayd 14 jir waxayna hadda kasbataa in ka badan $ 40 milyan. Waxay qandaraasyo aad u faa'iido badan la leedahay Givenchy, Calvin Klein, Pepsi, iyo magacyo kale oo badan.
Hooyadan iyo xaaskan kibirka leh ayaa wali maamula si ay u helaan waqti u dhexeeya kobcinta qoys qurux badan si ay u kasbadaan qaabaynta mushahar aad u habboon.
Waxay hal milyan oo doollar ka xishootaa kaalinta ugu sarraysa maadaama ay kasbato qiyaastii $ 39 milyan sannadkii.
3. Rosie Huntington-Dhab ahaantii
Quruxda ku dhalatay England waxay shaqadeeda bilowday 18years ka hor waxayna u ololaysay Burberry, Victoria oo qarsoodi ah, Ugg iyo kuwo kale.
Kuwani waxay isu yimaadaan si ay u kasbadaan $ 32 milyan oo cajiib ah.
Iyadu waa mid ka mid ah Qaababka Lacag -bixinta ugu sarreeya.
Iyadu waa ku guuleystihii hore ee quruxda reer Brazil. Iyadu waa Angel-ka Qarsoodiga ugu dheer Victoria waxayna kasbataa $ 31 milyan oo yaab leh.
Sida Adriana, Cara waxay kasbataa $ 31million oo cajiib ah sanad walba. Iyadu waa moodel laba jeer ah sannadka iyo heesaa/jilaa.
Waxay ka soo muuqatay bandhigyada guryaha moodada waaweyn sida Dolce iyo Gabbana, Burberry iyo kuwa kale.
Cara waa mid ka mid ah moodooyinka ugu mushaharka badan adduunka.
6. Gigi Xadiid
Waxay ku socotaa bandhigyada moodada waaweyn waxayna ka heshaa sumcado badan laakiin waxay wali waqti u siisaa inay taageerto ururada samafalka.
Waxay kasbataa $ 20 milyan.
7. Bella Xadiid
Walaasha ka yar Gigi, 24-jirkan ayaa matalaya quruxda Dior. Waxay kaloo tahay safiirka Bulgarie iyo Tag Heuer.
Waxay u socotaa magacyada moodada ee Paris, New York, iyo Milan.
Bella waa mid ka mid ah Moodooyinka ugu Mushaharka Badan Caalamka waxayna kasbataa $ 19 milyan.
Wejiga Puerto-Rican ee Estee Lauder wuxuu kasbadaa qiyaastii $ 19 milyan sanadkii. Iyada oo ay tahay mid ka mid ah moodooyinka ugu taajirsan uguna sarreeya adduunka.
Waxay ahayd moodelkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda Bariga Aasiya si ay u socodsiiso bandhigga moodada Fiktooriya.
Waxay sidoo kale u samaysay hawlo tifaftir Oscar de la Renta, Dolce iyo Gabbana, Hugo Boss, si ay u magacowdo dhowr.
Moodooyinka ugu sarreeya ee ugu mushaarka badan waxay kasbadaan $ 18 milyan.
Waxaa la sheegay inay u egtahay Grace Kelly. Iyadu waa Dutch sidoo kale waa jilaa. Kroes wuxuu sameeyay tifaftireyaal Vogue, Glamour, Time, iyo kuwo kale.
Kani waa moodelladii ugu dambeeyay ee ugu mushaarka badnaa adduunka. Waxay ku kacdaa $ 17 milyan sanadkii.
Akhri: 10 -ka Lacag ee Ugu Lacagta Badan Maraykanka | Dalalka Ugu Fiican Sanadka 2021
Way fududahay in laga arko liiskeenna aadka u qurxoon in warshadaynta moodeelku aad u macaash badan tahay. Si kastaba ha ahaatee ma timaaddo caqabado la'aan laakiin mar labaad, wax wanaagsan oo fudud ma soo baxaan.
Kuwani waa moodooyinkayaga ugu mushaharka badan uguna qanisan adduunka. Fiiri tusaalayaashan sare oo raac hoggaankooda haddii moodelintu ay tahay rabitaankaaga.
15 -ka Xiddig ee TV -ga ugu Mushaarka Badan Sanadka 2021 | La cusbooneysiiyay
10 Daaciyaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka | 2021
Lacag -bixiyayaasha ugu Mushaharka Badan Sanadka 2021 | 10 Waddan Ee Ugu Fiican
10ka ugu sarreeya ee ugu lacagta badan Dunida | 2021
Shaqaalaha Gobolka ee ugu mushaarka badan USA
Shaqaalaha gobolka ee ugu mushaharka badan USA Shaqaale dawladeed waa shaqsi ay u shaqeyso hay'ad…